इतिहासकै ठूलो आईपीओमा इतिहासकै बढी आवेदन, कतिले भरे सेयर ? – BikashNews
इतिहासकै ठूलो आईपीओमा इतिहासकै बढी आवेदन, कतिले भरे सेयर ?
२०७७ माघ ६ गते १७:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को प्राथमिक सेयर (आईपीओ)ले नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएकाे छ । कम्पनीकाे सेयरमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात १५ लाख बढी आवेदककाे आवेदन परेसँगै उक्त आईपीओले रेकर्ड ब्रेक गरेको हो । यसअघि चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओमा १२ लाख ५० हजार बढी आवेदककाे आवेदन परेकाे थियाे ।
निफ्राकाे सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार मंगलबार साँझ ५ बजेसम्ममा १५ लाख २ हजार ४९८ जना आवेदकले १७ कराेड ७९ लाख ४६ हजार ६५० कित्ता अर्थात १७ अर्ब ७९ कराेड ४६ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका छन् । जुन कम्पनीले सर्वसाधारणमा माग गरेकाे भन्दा २.३४ गुणा बढी आवेदन हाे । कम्पनीले सर्वसाधारणमा ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर माग गरेकाे हाे ।
बैंकले माघ २ गतेदेखि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरको ८ करोड कित्ता सेयर अर्थात कूल ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गरेकाे थियाे । जसमध्ये ०.२ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख कित्ता म्युचुअल फण्डहरुका लागि छुट्याइएको छ । र, बाँकी रहेको ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर भने सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको थियाे ।
यससँगै उक्त सेयरमा आवेदन दिने म्याद आज (मंगलबार)बाट सकिएकाे छ । गत माघ २ गतेदेखि निष्काशन भएको उक्त आईपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेसँगै कम्पनीले छिटो मिति अर्थात माघ ६ गते नै निष्काशन बन्द गरेकाे हो ।
बिक्री प्रबन्धक क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ करोड कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेकाे थियाे ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत पुस १० गते मात्रै बैंकलाई सो मात्राको आईपीओ निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको हो । यसअघि नेपाली पुँजीबजारमा कुनै पनि कम्पनीले यति ठूलो आकारको सेयर जारी गरेका थिएनन् । यति ठूलो मात्रामा सेयर जारी गर्ने बैंक नै पहिलो कम्पनी हो ।
सेयर निष्काशन गर्न इक्रा नेपालले मोडेरेट क्रेडिट रिक्स जनाउने इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बी ग्रेडिङ्ग प्रदान गरेको थियाे । उक्त क्रेडिट रेटिङ्ग प्राप्त संस्थालाई समयमानै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा मध्यम श्रेणीको सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा लिइन्छ ।